ZAMA UKUDLA KWAMANZI IZINSUKU EZIYI-10 UKWEHLISA ISISINDO - PAMPEREDPEOPLENY.COM - IMPILO
Zama Ukudla Kwamanzi Izinsuku Eziyi-10 Ukwehlisa Isisindo
Ezemidlalo I-IPL 2021, RR vs PBKS: U-KL Rahul uthi ukuyeka abahlali kuthathe umdlalo ngokujulile, kepha akazange ayeke ukukholwa
Ama-movie IBigg Boss Kannada 8 Ephreli 12 Amaphuzu avelele: I-Aravind KP ilahlekelwa yindandatho ka-Divya Uruduga I-Chandrachud ithola imizwa
Izindaba IPhini likaMongameli uVenkaiah Naidu ufuna kuphele ukucwaswa ngokobulili emphakathini
Ubuchwepheshe I-Xiaomi Mi 11X, i-11X Pro India Launch Slated Ngo-Ephreli 13 Ingabuyiselwa eRedmi K40, Mi 11i
Ezezimali I-TCS Q4 Inzuzo Ekhuphukile ye-15% kuma-Rs 9,246 Crore: Imemezela ukwahlukaniswa kwamaRs 15
Izimoto Ukuhlolwa Okulandelayo Okubanzi kwe-Skoda Octavia Ngaphandle Kokufihla: Ukuqalisa ENdiya Maduze
Ezemfundo Izivivinyo Zebhodi LaseMaharashtra 2021 Lihlehliselwe I-HSC Ne-SSC: UNgqongqoshe Varsha Gaikwad
Ikhaya Ezempilo Ukudla okufanelekile Ukudla Ukufaneleka oi-Abasebenzi Ngu Ukuphatha Okukhulu | Kubuyekezwe: NgoLwesithathu, Septhemba 28, 2016, 2:39 PM [IST] Ukulahlekelwa Isisindo: Mangaki Amanzi Okwehlisa Isisindo? | IBoldSky
Ukufa ukulahlekelwa yilabo kilos ngokujaha kepha ngendlela enempilo? Bese uzama ukudla kwamanzi ukunciphisa umzimba. Lokhu kudla kwamanzi izinsuku eziyi-10 kuzoqinisekisa ukuthi ulahlekelwa lawo kilos ngendlela enempilo. Uhlelo lokudla ngamanzi lokwehlisa isisindo ludinga ukulandela ngokuqinile ngoba izinzuzo zalo zizosiza ukunciphisa ama-kilos, ukususa ubuthi futhi okubaluleke kakhulu, kuzokusiza ekuzigcineni ulungile.
Ngokusho kochwepheshe, alukho uhlobo olungcono olukhathazayo lokuzila ukunciphisa isisindo kunokudla kwamanzi izinsuku eziyi-10. Uma uthatha lokhu kushesha, usebenzisa amanzi kuphela nezinye iziphuzo (njengejusi) ngaphandle kokuqina.
YAZI IZINZUZO ZAMANZI ABilayo
Ongoti bezempilo bakholelwa ukuthi lolu hlelo lokudla ngamanzi lokunciphisa umzimba lunohlu lwezinye izinzuzo zezempilo. Ilawula amazinga omfutho wegazi, inika umbono ocacile futhi ivimbela nomdlavuza futhi (amanzi asiza ukunciphisa ukukhula komdlavuza ezicutshini zamabele nasesikhunjeni). Ngaphezu kwakho konke, enye yezinzuzo zokudla ngamanzi ukuthi ivumela umzimba ukuthi welaphe ezintweni ezingcolisayo ekudleni kwethu nasemvelweni.
umkhuleko wamaHindu ukuthola umsebenzi
HLOLA: KUFANELE NGIPHUZE AMANZI ANGAKANANI?
Into enhle kakhulu ngokudla kwamanzi izinsuku eziyi-10 ukuthi akubizi lutho. Konke okudingeka ukwenze ukulandela lezi zinyathelo ukuze uzitholele ukudla.
Usuku 1 - Amanzi
Ukudla kwamanzi izinsuku eziyishumi ukunciphisa umzimba kuqala ngamanzi alula. Udinga ukuphuza amanzi alula phakathi nosuku ngegebe lamahora ama-2 noma ngaphezulu.
Indaba yothando lwe-dhoni sakshi ngesi-Hindi
Usuku 2 - Amanzi ahlaza
Amanzi aluhlaza awalutho ngaphandle kwetiye eliluhlaza. Itiye eliluhlaza elidliwe ngosuku 2 lizosiza ukuqala ukukhipha ubuthi emzimbeni wakho. Lokhu kudla kwamanzi izinsuku eziyi-10 zokwehlisa isisindo kumele kube netiye eliluhlaza.
Usuku 3 - Ice Water
Ukulandela uhlelo olufanele lokudla kwamanzi ukunciphisa umzimba, amanzi eqhwa azosiza ukukhulisa umzimba wakho ngaphandle kwesikhashana.
kanjani ukwehlisa isisindo ngemuva kokukhulelwa
Usuku 4 - Amanzi weJaggery
Kumalitha amahlanu wamanzi owadlayo ngosuku lwe-4, engeza 2 tbsp we-jaggery kuwo. Lokhu kuzosiza ukuvuselela amandla akho.
Usuku lwesi-5 - Amanzi weSobho
Udinga ukuthatha amaprotheni novithamini uma usudleni wamanzi izinsuku eziyi-10 ukunciphisa isisindo. Phuza inkomishi yesobho izikhathi ezine ngosuku lwesi-5 ukuze wenze isisu sakho sizizwe sigcwele futhi unqande lezo zinhlungu zendlala.
Usuku 6 - Amanzi Anezithelo
Izithelo zingenye yezinto odinga ukuzisebenzisa uma ukulesi sidlo samanzi izinsuku eziyi-10 ukuze unciphise umzimba. Izithelo ngesimo sejusi ukuphela kwendlela ongayilandela.
Usuku 7 - Amanzi Amnandi
Amanzi amnandi aqukethe ingcosana kashukela nedeshi kasawoti. Ngosuku lwe-7 lokudla kwamanzi izinsuku eziyi-10 zokwehlisa isisindo, sebenzisa la manzi anoshukela. Enye yezinzuzo zokudla ngamanzi ukuthi kusiza ukugcina umfutho wegazi lakho ulinganisela.
Usuku 8 - Amanzi ashisayo
Amanzi ashisayo asiza ukusika amanoni ngokushesha lapho ufuna ukunciphisa umzimba. Amanzi ashisayo noma amanzi afudumele angasiza ekwehliseni okusheshayo kwe-cellulite futhi.
ungayithola kanjani imilenze emincane ngokushesha
Usuku 9 - Amanzi Amakhambi
Amanzi wamakhambi asiza ukususa ubuthi emzimbeni wakho. Amandla wamakhambi akhipha ubuthi ngosuku lwe-9 lokudla kwamanzi izinsuku eziyi-10 ukunciphisa isisindo.
Usuku lwe-10 - Amanzi Elamula
Amanzi kalamula kuthiwa angenye yezindlela ezingcono zokwehlisa isisindo. Kodwa-ke, ngamanzi kalamula, udinga ukufaka uju kanye nengcosana yesinamoni ukusiza ekwehliseni lawo kilos.
ukuqinisa kanjani isifuba ekhaya
amafutha omnqumo pomace alungele impilo
kanjani ukwenza izindebe ukuzivocavoca ezincane
kanjani ukunciphisa umzimba nge-cumin
imifino engadliwa uhlu oluhlaza
ungakuphulukisa kanjani ukukhishwa ngaphambi kwesikhathi ngokwemvelo